Sida Kooxdaada Iibka iyo Suuqgeynta U Joojin Karaan Wax Tabarashada Daalka Dijital ah | Martech Zone
Labadii sano ee la soo dhaafay waxay ii ahayd caqabad cajiib ah. Dhinaca shakhsi ahaaneed, waxaa la ii duceeyay ubadkeygii ugu horreeyay. Dhinaca ganacsiga, waxaan ku biiray ciidamada qaar ka mid ah asxaabta oo aan aad u ixtiraamo waxaanan dhisaynaa latalin isbeddelka dhijitaalka ah oo runtii bilaabaysa. Dabcan, iyada oo taas badhtankeeda lagu jiro, waxa dhacay masiibo ka leexisay dhuumahayaga iyo shaqaalaysiinta… taas oo hadda ku soo laabatay waddadii. Ku tuur daabacaadan, shukaansiga, iyo jirdhiska… noloshayduna waa beerta xayawaanka hadda.
Hal shay oo laga yaabo inaad dareentay labadii sano ee la soo dhaafay ayaa ah inaan joojiyay podcasting-gayga. Waxaan haystay 3 podcasts firfircoon dhowr sano ka hor - suuqgeyn, ganacsiga maxalliga ah, iyo taageerada mujaahidiinta. Podcasting waa xamaasad aan leeyahay, laakiin markii aan eegay jiilka hogaanka iyo kobaca ganacsiga, ma aysan bixinayn koboc dakhli oo degdeg ah markaa waa inaan dhinac iska dhigo. Podcast-ka 20-daqiiqo ah wuxuu gooyn karaa ugu badnaan 4 saacadood maalintii shaqadayda si aan u jadwaleeyo, u duubo, u tafatiro, u daabaco una horumariyo dhacdo kasta. Luminta dhowr maalmood bishii iyada oo aan isla markiiba dib loogu soo celin maalgashiga kaliya ma ahayn wax aan awoodi karo hadda. Xusuusin dhinaca… Waxaan dib u hawlgelin doonaa mid kasta oo ka mid ah podcasts-ka isla marka aan awoodo waqtiga.
Daalka Dijital ah
Daalka dhijitaalka ah waxaa lagu qeexaa xaalad daal maskaxeed oo ay keentay isticmaalka xad-dhaafka ah iyo isticmaalka joogtada ah ee qalabka dhijitaalka ah ee badan
Lixar, Maareynta Daalka Dijital ah
Xataa kuuma sheegi karo inta telefoon, fariimaha tooska ah, iyo iimaylada aan helo maalin kasta. Badankoodu waa codsiyo, qaarna waa saaxiibo iyo qoys, iyo -dabcan - waxa ku jira qaar ka mid ah hoggaanka iyo xidhiidhka macmiilka. Waxa aan ku dadaalaa in aan shaandheeyo oo aan jadwaleeyo sida ugu fiican ee aan awoodo, laakiin ma sii wado... haba yaraatee. Hal mar oo ka mid ah xirfadeyda, waxaan lahaa kaaliyaha fulinta waxaanan rajeynayaa raaxadaas mar kale… laakiin kor u qaadista kaaliyaha waxay sidoo kale u baahan tahay waqti. Markaa, hadda, si fudud ayaan u dhibtooday.
Isku-darka shaqada ee gudaha goobaha aan sameeyo maalinta oo dhan, daalka isgaarsiinta dhijitaalka ah sidoo kale waa xad dhaaf. Dhaqdhaqaaqyada niyad jabka badan ee i daaliyay waxaa ka mid ah:
Waxaan haystaa shirkado qabow oo dibadda ka baxa oo si toos ah u toosiya jawaabaha oo maalin kasta ka buuxiya sanduuqayga farriimaha doqonimada ah sida, Helitaanka tan xagga sare ee sanduuqaaga ama ku qarinta emailka RE: mawduuca mawduuca si aad u malaynayso inaan horay uga hadalnay. Ma jiraan wax ka sii xanaaq badan… Waxaan sharad lahaa in tani ay tahay badh ka mid ah sanduuqa-mailkayga hadda. Isla markii aan u sheego inay joojiyaan, wareeg kale oo otomaatig ah ayaa soo socda. Waxa aan ku qasbanaay in aan geeyo qaar ka mid ah xeerarka shaandhaynta cajiibka ah iyo sanduuqa boostada si aan isku dayo in aan keeno fariimaha muhiimka ah ee sanduuqayga.
Waxaan haystaa shirkado qaar oo ka tanaasula inay ila soo xidhiidhaan iimaylka, ka dibna fariin iigu soo diraan shabakadaha bulshada. Ma heshay iimaylkayga? waa daw hubaal ah in aan kugu xidho baraha bulshada Haddii aan u malayn lahaa in iimaylkaagu muhiim yahay, waan ka jawaabi lahaa… joojiso ii soo dirida isgaarsiin badan oo xidhidhiyaha warside kasta oo aan haysto.
Waxa ugu xun waa asxaabta, asxaabta, iyo qoyska kuwaas oo si buuxda u nool oo aaminsan inaan ahay qof qallafsan sababtoo ah kama jawaabo. Noloshaydu way BUUXSAN tahay hadda, waana wax cajiib ah. Aniga oo qiimaynaya xaqiiqada ah in aan ku mashquulsanahay qoyska, asxaabta, shaqada, guriga, jirdhiska, iyo daabacaaddayda waa mid niyad jab leh. Hadda waxaan qaybiyaa kayga Isku xirnaan ku xidhidh asxaabta, qoyska, iyo asxaabta si ay wakhti u xafidaan jadwalkayga. Oo waxaan ilaaliyaa jadwalkayga!
Waxa aan bilaabayaa in aan arko shirkado aad iyo aad u badan oo SPAM ah fariimahayga qoraalka ah… taas oo ka baxsan cadhadayda. Farriimaha qoraalka ahi waa kuwa ugu soo jiidashada iyo shakhsi ahaaneed ee dhammaan hababka isgaarsiinta. Farriinta qoraalka qabow ee la ii soo diro waa dariiq hubaal ah oo ah inaanan waligey ku ganacsan mar dambe.
Kaligey ma ihi… marka loo eego natiijooyinka sahan cusub ee PFL:
Maamulaha iyada oo loo marayo heerka C jawaab-bixiyeyaasha waxay helayaan in ka badan 2.5 jeer miimaylada xayaysiinta ee todobaadlaha ah, celcelis ahaan 80 emails todobaadkii. Qoraal dhanka kale ah… Waxaan helaa wax ka badan taas maalin gudaheed.
Xirfadlayaasha ganacsiga waxay helayaan a celceliska 65 emails todobaadkii.
Shaqaalaha isku-dhafka ah ayaa helaya kaliya 31 emails todobaadkii.
Shaqaale fogfog ayaa helaya in ka badan 170 emails todobaadkii, in ka badan 6 jeer in ka badan emails ka badan shaqaalaha caadiga ah.
In ka badan kala badh dhammaan shaqaalaha waxa la kulma daal ay ugu wacan tahay mugga isgaadhsiinta dhiirrigelinta dhijitaalka ah ee ay ka helaan shaqada. 80% jawaab bixiyaasha heerka C-ga waa ay buux dhaafiyeen tirada xayeysiisyada dhijitaalka ah ee ay helaan!
Sida aan ula tacaalo Daalka Isgaadhsiinta Dijital ah
Dareenkayga ku aaddan daalka isgaarsiinta dhijitaalka ah waa:
Jooji - Haddii aan helo emailo badan oo qabow ama fariimo, waxaan u sheegaa qofka inuu joojiyo oo iga saaro xogtiisa. Inta badan, way shaqeysaa.
Raali ha ka bixin - Weligay ma odhan "Waan ka xumahay ..."Haddii aanan dejin rajo ah inaan ka jawaabi doono waqti go'an. Tan xitaa waxaa ku jira lacag-siinta macaamiisha kuwaas oo aan marar badan xasuusiyo in aan waqti la qabtay iyaga. Ma ka xumahay inaan ku mashquulsanahay shaqo buuxda iyo nolosheeda gaarka ah.
delete - Inta badan waxaan tirtiraa fariimaha aniga oo aan xitaa jawaabin, dad badanina kuma dhibaan inay mar kale isku dayaan in ay igu dhuftaan.
Filter - Waxaan foomamkayga, sanduuqa-geliska, iyo dhex-dhexaadinta kale u shaandheeyaa meelaha iyo ereyada muhiimka ah ee aanan waligay ka jawaabi doonin. Fariimaha waa la tirtiray isla markiiba Miyaan helaa fariimo muhim ah oo mararka qaar lagu dhex daro? Haa… ah fiican.
Mudnaan siin – Inbox-kaygu waa sanduuqyo casri ah oo taxane ah oo ay si heersare ah u shaandheeyaan macmiilka, fariimaha nidaamka iwm. Tani waxa ay ii sahlaysaa in aan si fudud mid walba u eego oo aan uga jawaabo halka inta kale ee sanduuqayga ay ka buuxaan wax aan macno lahayn.
Ha ku dhibin – Taleefankaygu wuxuu daaran yahay Ha dhibin fariintayduna waa buuxdaa. Haa… marka laga reebo fariimaha qoraalka ah, wicitaanada taleefanku waa kuwa ugu xun. Waxaan kor u qaadaa shaashadda teleefanka si aan u arko haddii ay tahay wicitaan muhiim ah oo ka yimid saaxiib, macmiil, ama xubin qoys, laakiin qof kasta oo kale ayaa joojin kara inay i soo wacaan.
Maxaad samayn kartaa si aad u caawiso Daalka Isgaadhsiinta Dijital ah
Halkan waxaa ah siddeed siyaabood oo aad uga caawin karto iibintaada iyo dadaalkaaga isgaarsiineed.
Shaqsi hel - U sheeg qaatahaaga sababta aad ugu baahan tahay inaad la xidhiidho, dareenka degdega ah, iyo sababta ay faa'iido ugu leedahay iyaga. Ma jiro wax ka xun, sida ay aniga ila tahay, oo aan ahayn fariin maran "Waxaan isku dayayaa inaan ku qabto..." Waxba igama gelin… mashquul ayaan ahay oo waxaad hoos ugu dhacday muhiimadayda.
Ha ku Xadgudbin Automation-ka - fariimaha qaar ayaa muhiim u ah ganacsiyada. Gawaadhida wax iibsiga ee la dayacay, tusaale ahaan, waxay inta badan u baahan yihiin dhawr xasuusin si ay qof ugu ogeysiiyaan inay kaga tageen alaab gaadhiga dhex taal. Laakiin ha daahin… Laga yaabaa in aanay hadda haysan lacag caddaan ah oo ay ku iibsadaan.
Deji Rajada - Haddii aad rabto inaad si otomaatig ah u sameyso ama aad ula socoto, qofka la socodsii. Haddii aan ku akhriyo iimaylka in wicitaan qabow uu daba socon doono dhowr maalmood gudahood, waxaan u sheegi doonaa inay ogaadaan inaysan maanta dhibin. Ama dib baan u qori doonaa oo u sheegi doonaa inaan mashquul ahay oo aan taabto saldhiga rubuca soo socda.
Tus dareenka - Waxaan lahaa lataliye wakhti hore oo dhahay mar kasta oo uu qof la kulmo markii ugu horeysay, wuxuu iska dhigayaa inay khasaare ku qabaan qoyskooda. Waxa uu samaynayey waxa uu hagaajinayey dareenkiisa iyo ixtiraamka uu u hayo qofka. Ma toos u diri lahayd iimaylada qof ku maqan aaska? Waan ka shakisanahay. Sababtoo ah adiga ayay muhiim kuu tahay macnaheedu maaha inay muhiim u tahay iyaga. U roonow inay yeelan karaan mudnaan kale.
Bixi Ogolaansho - Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee iibka ayaa ah in la siiyo ogolaanshaha qof inuu sheego Maya. Waxa aan qoray dhawr email bishii ina dhaaftay si aan ugu wajaho rajada waxaanan furay emailka aniga oo ogaysiinaya in kani yahay emailka kaliya ee ay helayaan waxaana aad ugu faraxsanahay in aan dib u maqlo in aanay u baahnayn. ee adeegyadayda. Si xushmad leh oo qofka loo siiyo ogolaansho uu ku dhaho Maya waxay kaa caawin doontaa nadiifinta sanduuqa boostada waxayna awood kuu siin doontaa inaadan wakhti ku lumin ka cadhaysiinta rajooyinka suurtagalka ah.
Bixi Ikhtiyaarada Mar walba ma rabo in aan joojiyo xiriirka xiisaha, laakiin waxaa laga yaabaa in aan rabo in aan galo hab kale ama waqti kale. Sii qaatahaga doorashooyin kale - sida dib u dhigista bil ama rubuc, bixinta isku xirka jadwalkaaga ballan, ama dooro qaab kale oo isgaarsiineed. Dhexdhexaadinta aad jeceshahay ama habka aad ku wada xiriiri karto waxaa laga yaabaa inaysan kooda ahayn!
Hel Jireed - Sida qufulku hoos u dhaco oo safarku furmo, waa waqtigii dib loogu noqon lahaa la kulanka dadka halkaas oo isgaarsiintu ka kooban tahay dhammaan dareenka ay u baahan yihiin bini'aadamka si ay si hufan ula xiriiraan. Xidhiidhka aan afka ahayn ayaa lama huraan u ah samaynta cilaaqaadka… taasna laguma fulin karo fariimaha qoraalka ah.
Isku day Diritaanka Tooska ah - U guurista meelo badan oo faragalin ah oo loo tago qaataha aan ka jawaabin waxay noqon kartaa jihada khaldan. Ma isku dayday dhexdhexaadin badan sida boostada tooska ah? Waxaan helnay guul aad u weyn iyadoo rajada lagu beegsanayo boostada tooska ah sababtoo ah shirkado badan kama faa'iideystaan. Halka iimaylka aanu kharash aad u badan ku bixin in la keeno, fariintaada tooska ah laguma aaso sanduuqa boostada oo ay ku jiraan kumanaan kale oo waraaqo toos ah.
Iyadoo fariimaha tooska ah ee sida liidata loo beegsaday ay macaamiishu iska indhatiraan si la mid ah xayaysiisyada dhijitaalka ah ee saldhiga ka baxsan ama qaraxyada iimaylka, fariinta tooska ah ee sida saxda ah loo fuliyo waxay abuuri kartaa khibrado la xasuusan karo oo saamayn leh. Marka lagu daro istaraatiijiyada suuqgeynta guud ee ururka, boostada tooska ah waxay u ogolaataa shirkadaha inay kaxeeyaan ROI weyn oo ay kordhiyaan xidhiidhka astaanta ee macaamiisha hadda iyo mustaqbalka.
Nick Runyon, maamulaha guud ee PFL
Qof kastaa waxa uu la kulmaa daal dhijitaal ah
Muuqaalka ganacsi ee maanta, tartanka aragtiyaha, dhagsiimada, iyo wadaagista maskaxda waa mid daran. In kasta oo ay sii kordheyso aaladaha suuq-geynta dhijitaalka ah oo sii kordheysa oo meel walba leh, ganacsiyo badan ayaa isku arka in ay la halgamayaan sidii ay uga dhex heli lahaayeen macaamiisha iyo rajada.
Si loo fahmo dhibaatooyinka ay shirkado badani la kulmaan soo jiidashada dareenka dhagaystayaasha, PFL waxay sahamisay in ka badan 600 xirfadlayaal ganacsi oo fadhigoodu yahay Maraykanka. Natiijooyinka PFL's 2022 Sahanka Ka qaybgalka Dhageystayaasha Isku-dhafka ah la ogaaday in shakhsiyaynta, nuxurka, iyo xeeladaha suuq-geynta jirka, sida boostada tooska ah, ay saameyn weyn ku yeelan karto kartida calaamadaha si ay u gaaraan dhageystayaasha gubtay.
Riix halkan si aad u soo dejiso macluumaadka
Natiijooyinka muhiimka ah ee ka soo baxay sahanka lagu sameeyay in ka badan 600 oo khubarada ganacsi ee fadhigoodu yahay Mareykanka waxaa ka mid ah:
52.4% shaqaalaha ganacsiga waxay la kulmaayaan daal dhijitaal ah taasoo ka dhalatay mugga sare ee isgaarsiinta dhijitaalka ah ee ay helaan.
80% jawaab bixiyaasha heerka C iyo 72% jawaab bixiyaasha heerka tooska ah ayaa tilmaamaya Dareema culeyska mugga isgaarsiinta xayeysiinta dhijitaalka ah waxay ku helaan shaqada.
56.8% xirfadlayaasha la waraystay ayaa ah Waxay u badan tahay in la furo shay lagu helo boostada jireed marka loo eego iimaylka.
Dhaqaalaha Feejignaanta ee maanta, awoodda lagu soo qaban karo dhagaystayaasha oo ay kasban karaan hawlgelintooda waxay noqotay badeecad aad u yar. Daalka dhijitaalka ah waa xaqiiqo shakhsiyaad badan, taas oo macnaheedu yahay in calaamaduhu ay tahay inay helaan habab cusub oo ay ku dhiirigeliyaan macaamiisha inay tallaabo qaadaan. Cilmi-baadhisteennii ugu dambaysay waxay iftiiminaysaa muuqaalka suuq-geynta B2B ee tartanka aadka u sarreeya ee maanta iyo sida shirkaduhu u isticmaali karaan xeeladaha isku-dhafka ah si ay ugu soo muuqdaan macaamiisha iyo rajada.
Waa kan macluumaadka buuxa ee natiijooyinka sahanka la xidhiidha:
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Isku xirnaan ee maqaalkani.
Tags: 2022isku dar ahdaalka isgaarsiinta dhijitaalka ahdaalka dhijitaalka ahboostada tooska ahsahanka hawlgelintasahanka ka qaybgalka dhagaystayaasha isku-dhafaninfographiclixarmarketingshakhsi ahaaneedboostada tooska ah ee shakhsi ahaaneedboostada shakhsi ahaaneedpflsuuqgeyn jireed